ပရိသတ်တွေ အံ့အားသင့်ခဲ့ရတဲ့ ပြေတီဦးရဲ့ဆုတောင်းသံ – MyanmarEating
မင်းသားပြေတီဦးကတော့ အနုပညာလောကရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လက်ပါ။ အကယ်ဒမီ Luck အရမ်းရှိတဲ့ မင်းသား တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နှစ်တိုင်းလိုလို အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ စင်မြင့်ထက်ကို တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် ပြေတီဦးရဲ့ အနုပညာခရီးလမ်းက ထင်သလောက်မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။
ဟိုးအရင် မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကား အစီအစဉ်တွေမှာတည်းက ပါဝင်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ အနုပညာအတွက် ပေးဆပ်ရင်းနှီး ကြိုးစားလာရတဲ့ အချိန်တွေက မနည်းပါဘူး။ ဒီလိုကြိုးစားမှုတွေကြောင့်ပဲ အနုပညာလောကရဲ့ ထွန်းတောက်တဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး နေရာတစ်နေရာ အခိုင်အမာရရှိပိုင်ဆိုင်နေတာပါ။ အနုပညာ Life မှာတင်မဟုတ်ဘဲ family life မှာပါ အောင်မြင်နေပြီး ချောမောလှပတဲ့ ဇနီးချောလေး အူဝဲနဲ့ ချစ်စရာ သားသား၊မီးမီး နှစ်ယောက်ကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
ပြေတီဦးက အနုပညာတင်မဟုတ်ဘဲ ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းကိုပါတည်ထောင်ပြီး ပရဟိတ အလုပ်တွေကိုလည်း သူတက်နိုင်သမျှ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းကတော့ အဓိကအနေနဲ့ ပညာရေးကဏ္ဍ တွေ၊ ကလေးတွေကို ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့မှုတွေ လုပ်ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပါ။ အားလုံးရဲ့ အားကျမှုကို ခံထားရတဲ့ ပြေတီဦးမှာလည်း သူ့ဘ၀မှာ ဖြစ်ချင်၊ပြည့်ချင်တဲ့ ဆုတောင်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။
ပြေတီဦးက သူပြည့်ချင်တဲ့ ဆုတောင်းတွေအကြောင်းကို FB မှာ အခုလိုလေး ရေးထားပါတယ်။
မေတ္တာတရားနဲ့ အမြဲတမ်း ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့သူ…
အမြဲတမ်း ငြိမ်းချမ်းတဲ့သူ ဖြစ်ပါရစေ….
ကျွန်တော်ပြည့်ချင်တဲ့ဆုတွေပါ…..” ဆိုပြီး တင်ထားပါတယ်။ သူပြည့်ချင်တဲ့ ဆုတွေကတော့ ပစ္စည်းဥစ္စာမျိုး မဟုတ်ပဲ ငြိမ်းချမ်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းပါ။
FROM ပြေတီဦးရဲ့ FB
မငျးသားပွတေီဦးကတော့ အနုပညာလောကရဲ့ ထိပျတနျးမငျးသားတဈလကျပါ။ အကယျဒမီ Luck အရမျးရှိတဲ့ မငျးသား တဈယောကျဖွဈပွီး နှဈတိုငျးလိုလို အကယျဒမီဆုပေးပှဲ စငျမွငျ့ထကျကို တကျရောကျနိုငျခဲ့သူပါ။ ဒါပမေယျ့ ပွတေီဦးရဲ့ အနုပညာခရီးလမျးက ထငျသလောကျမလှယျကူခဲ့ပါဘူး။
ဟိုးအရငျ မွနျမာစာ၊ မွနျမာစကား အစီအစဉျတှမှောတညျးက ပါဝငျလာခဲ့သူဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ အနုပညာအတှကျ ပေးဆပျရငျးနှီး ကွိုးစားလာရတဲ့ အခြိနျတှကေ မနညျးပါဘူး။ ဒီလိုကွိုးစားမှုတှကွေောငျ့ပဲ အနုပညာလောကရဲ့ ထှနျးတောကျတဲ့ ကွယျတဈပှငျ့ဖွဈလာခဲ့ပွီး နရောတဈနရော အခိုငျအမာရရှိပိုငျဆိုငျနတောပါ။ အနုပညာ Life မှာတငျမဟုတျဘဲ family life မှာပါ အောငျမွငျနပွေီး ခြောမောလှပတဲ့ ဇနီးခြောလေး အူဝဲနဲ့ ခဈြစရာ သားသား၊မီးမီး နှဈယောကျကိုပါ ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။
ပွတေီဦးက အနုပညာတငျမဟုတျဘဲ ပွတေီဦးဖောငျဒေးရှငျးကိုပါတညျထောငျပွီး ပရဟိတ အလုပျတှကေိုလညျး သူတကျနိုငျသမြှ ကူညီလုပျကိုငျပေးနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ ပွတေီဦးဖောငျဒေးရှငျးကတော့ အဓိကအနနေဲ့ ပညာရေးကဏ်ဍ တှေ၊ ကလေးတှကေို ပညာသငျစရိတျထောကျပံ့မှုတှေ လုပျပေးနတေဲ့ အဖှဲ့အစညျးပါ။ အားလုံးရဲ့ အားကမြှုကို ခံထားရတဲ့ ပွတေီဦးမှာလညျး သူ့ဘဝမှာ ဖွဈခငျြ၊ပွညျ့ခငျြတဲ့ ဆုတောငျးလေးတှေ ရှိပါတယျ။
ပွတေီဦးက သူပွညျ့ခငျြတဲ့ ဆုတောငျးတှအေကွောငျးကို FB မှာ အခုလိုလေး ရေးထားပါတယျ။
မတ်ေတာတရားနဲ့ အမွဲတမျး ခှငျ့လှတျနိုငျတဲ့သူ…
အမွဲတမျး ငွိမျးခမျြးတဲ့သူ ဖွဈပါရစေ….
ကြှနျတျောပွညျ့ခငျြတဲ့ဆုတှပေါ…..” ဆိုပွီး တငျထားပါတယျ။ သူပွညျ့ခငျြတဲ့ ဆုတှကေတော့ ပစ်စညျးဥစ်စာမြိုး မဟုတျပဲ ငွိမျးခမျြးတဲ့သူတဈယောကျဖွဈခငျြတယျဆိုတဲ့ ဆုတောငျးပါ။
FROM ပွတေီဦးရဲ့ FB